ပေါင်တစ်သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ အဝတ်ဗီရိုနဲ့ တစ်လကိုပေါင်ငါးထောင်ကျော်မုန့်ဖိုးရနေတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး အဖေချစ်သမီးလေး.... - MM Live News
နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာချုပ်အိတ်တွေ၊ပေါင်လေးသိန်းကျော်တန်တဲ့ Fabergé လက်စွပ်၊ ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ တကယ့် ထိပ်တန်း ကမ္ဘာကျော် Branded ဖိနပ်တွေ၊ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ်အသုံးအဆောင်တွေ….
ဒါတွေဒါတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲ။ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေ Hollywood က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ မဟုတ်ရပါဘူး။ ခုမှ အသက် 18ကိုပြည့်လုပြည့်ခင်လေးရှိတဲ့ Saffron ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ ရွှေငွေရတနာတွေပါ။
Saffron ဟာ သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးလိင်တူချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ အဆင့်ဆင့်ခက်ခက်ခဲခဲမွေးထားရတဲ့သမီးရတနာလေးပါ။
သူမနဲ့ သူမရဲ့ အမြွှာအစ်ကို Aspen ကို မိဘတွေကသိပ်ချစ်ကြပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီိးသလိုပဲ သူမမှာ လိုတရဘဝနဲ့နေလာရပြီး တစ်လကိုမုန့်ဖိုးအနေနဲ့ ပေါင်ငါးထောင်ကျော်ပုံမှန်ရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူမမှာ သူမလိုပဲမွေးထားရတဲ့ အသက်ခြောက်နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အမြွှာမောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ အသက်ဆယ့်သုံးနှစ်အရွယ် မောင်လေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။
Saffron ရဲ့ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် အဖေနှစ်ယောက်က Range Rover ကားအဖြူလေးတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး သူမရဲ့ အမြွှာအစ်ကို Aspen ကိုတော့အနက်ရောင်ဆင်တူတစ်စီးမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Saffron ဟာ ချမ်းသာပြီးပျက်စီးဆိုးသွမ်းနေတဲ့မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။သူမကငွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းကောင်းသိသလို ဘဝကိုကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးဖြတ်သန်းဖို့လည်းနားလည်သူပါ။
“ကျွန်မက သိပ်ကိုကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပါ၊ဖေကြီးနဲ့ဖေဖေတို့က ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေကို အလိုလိုက်ရတာသိပ်ပျော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့အမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိတဲ့စကားကတော့ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုကိုယ့်ဘာသာရှာရင် ကိုယ်ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ၊ ကျွုန်မက အသက်လည်းပြည့်ပြီဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်လေ” လို့ Saffron ကပြောပါတယ်။
Saffron ဟာ Barking Mad Cosmetics လို့အမည်ရတဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင် Skincare brand ကို ဖွင့်လှစ်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ကာ အဲဒီ Brand ထဲမှာ သာမန်လူတန်းစားတွေတတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ပေါင်25ပေါင်တန် Nightcream နဲ့ ပေါင် 30တန် Emulsion နို့ရည်တို့ပါဝင်ပါတယ်။
နာမညျကြျောဒီဇိုငျနာခြုပျအိတျတှေ၊ပေါငျလေးသိနျးကြျောတနျတဲ့ Fabergé လကျစှပျ၊ ပေါငျသနျးပေါငျးမြားစှာတနျဖိုးရှိတဲ့ လကျဝတျရတနာတှေ၊ တကယျ့ ထိပျတနျး ကမ်ဘာကြျော Branded ဖိနပျတှေ၊ကောငျးပဆေို့တဲ့ မိတျကပျအသုံးအဆောငျတှေ….
ဒါတှဒေါတှရေဲ့ပိုငျရှငျဟာ ဘယျသူလို့ထငျပါသလဲ။ နာမညျကြျောအဆိုတျောတှေ Hollywood က ရုပျရှငျမငျးသမီးတှေ မဟုတျရပါဘူး။ ခုမှ အသကျ 18ကိုပွညျ့လုပွညျ့ခငျလေးရှိတဲ့ Saffron ဆိုတဲ့ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးရဲ့ပစ်စညျးဥစ်စာ ရှငှေရေတနာတှပေါ။
Saffron ဟာ သနျးကွှယျသူဋ်ဌေးလိငျတူခဈြသူနှဈဦးရဲ့ အငှားကိုယျဝနျဆောငျနဲ့ အဆငျ့ဆငျ့ခကျခကျခဲခဲမှေးထားရတဲ့သမီးရတနာလေးပါ။
သူမနဲ့ သူမရဲ့ အမွှာအဈကို Aspen ကို မိဘတှကေသိပျခဈြကွပါတယျ။ဆိုခဲ့ပွီိးသလိုပဲ သူမမှာ လိုတရဘဝနဲ့နလောရပွီး တဈလကိုမုနျ့ဖိုးအနနေဲ့ ပေါငျငါးထောငျကြျောပုံမှနျရနတေယျလို့ဆိုပါတယျ။
သူမမှာ သူမလိုပဲမှေးထားရတဲ့ အသကျခွောကျနှဈရှိပွီးဖွဈတဲ့ အမွှာမောငျလေးနှဈယောကျနဲ့ အသကျဆယျ့သုံးနှဈအရှယျ မောငျလေးတဈယောကျလညျးရှိပါသေးတယျ။
Saffron ရဲ့ အသကျဆယျ့ရှဈနှဈပွညျ့မှေးနအေ့တှကျ အဖနှေဈယောကျက Range Rover ကားအဖွူလေးတဈစီးလကျဆောငျပေးခဲ့ပွီး သူမရဲ့ အမွှာအဈကို Aspen ကိုတော့အနကျရောငျဆငျတူတဈစီးမှေးနလေ့ကျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။
Saffron ဟာ ခမျြးသာပွီးပကျြစီးဆိုးသှမျးနတေဲ့မိနျးမငယျလေးတဈယောကျမဟုတျပါဘူး။သူမကငှရေဲ့တနျဖိုးကိုကောငျးကောငျးသိသလို ဘဝကိုကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီးဖွတျသနျးဖို့လညျးနားလညျသူပါ။
“ကြှနျမက သိပျကိုကံကောငျးတဲ့မိနျးကလေးပါ၊ဖကွေီးနဲ့ဖဖေတေို့က ကြှနျမတို့မောငျနှမတှကေို အလိုလျိုကျရတာသိပျပြျောပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့အမွဲတမျးပွောလရှေိ့တဲ့စကားကတော့ကိုယျ့ပိုကျဆံကိုကိုယျ့ဘာသာရှာရငျ ကိုယျကွိုကျသလိုသုံးလို့ရတယျဆိုတာပါပဲ၊ ကြှုနျမက အသကျလညျးပွညျ့ပွီဆိုတော့အလုပျလုပျရတော့မယျလေ” လို့ Saffron ကပွောပါတယျ။
Saffron ဟာ Barking Mad Cosmetics လို့အမညျရတဲ့ သူ့ကိုယျပိုငျ Skincare brand ကို ဖှငျ့လှဈရောငျးခထြားပွီးဖွဈကာ အဲဒီ Brand ထဲမှာ သာမနျလူတနျးစားတှတေတျနျိုငျတဲ့ ဈေးနှုနျးတှဖွေဈတဲ့ပေါငျ25ပေါငျတနျ Nightcream နဲ့ ပေါငျ 30တနျ Emulsion နို့ရညျတို့ပါဝငျပါတယျ။
နေ့ ပြန်တိုး မပေးနိုင်လို့မိသားစု အားလုံး သတ်သေ….
April 27, 2019 MM Live